Ebe nchekwa NGINX - LinuxCapable
Otu esi etinye Nginx na openSUSE Leap 15
Saturday, January 1, 2022 Tọzdee, Disemba 28, 2021 by Jọshụa James
NGINX bụ isi mmalite mepere emepe, ngwa nkesa HTTP efu. Na mgbakwunye na ikike nkesa HTTP ya, NGINX nwekwara ike ịrụ ọrụ dị ka ihe nkesa proxy maka e-mail (IMAP, POP3, na SMTP) yana proxy na-atụgharị na ihe nkwụnye ụgwọ maka HTTP, TCP, na UDP sava. Ebumnuche n'azụ NGINX bụ imepụta…
Categories openSUSE Tags NGINX, megheSUSE Leap 15
Otu esi etinye Nginx Mainline kacha ọhụrụ na CentOS 8 Stream
Maka ndị na-eji CentOS 8 Stream, ị nwere ike chọpụtala na ịwụnye Nginx ozugbo na Appresteam ya anaghị etinye ụdị kwụsiri ike ma ọ bụ nke isi. Ọ mara mma n'azụ ebe Nginx kwụsiri ike, Mainline nọ n'oge mmepe ya ugbu a. Maka ọtụtụ, na-eji ndabara…
Categories CentOS iyi Tags CentOS Stream 8, NGINX
Wenezdee, Jenụwarị 12, 2022 Tọzdee, Nọvemba 11, 2021 by Jọshụa James
Categories Fedora Tags Fedora 35, NGINX
Saturday, October 30, 2021 by Jọshụa James
WordPress bụ usoro njikwa ọdịnaya kachasị nke edere na PHP, jikọtara ya na MySQL ma ọ bụ nchekwa data MariaDB. Ị nwere ike ịmepụta ma jikwaa saịtị na-enweghị ihe ọmụma ọ bụla na mmepe weebụ ma ọ bụ nzuzo. Emepụtara ụdị WordPress mbụ na 2003 site n'aka Matt Mullenweg na Mike Little ma ugbu a…
Categories Nkume linux Tags ỤLỌ, MariaDB, NGINX, PHP, Nkume Linux 8, WordPress
Saturday, October 30, 2021 Sunday, October 24, 2021 by Jọshụa James
Categories Nkume linux Tags NGINX, Nkume Linux 8
Maka ndị na-eji openSUSE 15 Leap, ị nwere ike achọpụtala na ịwụnye Nginx ozugbo na ebe nchekwa ya anaghị etinye ụdị kwụsiri ike ma ọ bụ nke isi. Nke a bụ ihe a na-emekarị n'ọtụtụ nkesa na-elekwasị anya na nkwụsi ike nke ngwugwu ma na-enye naanị ahụhụ ma ọ bụ mmelite nchekwa ngwa ngwa ruo mgbe nkesa bụ isi na-esote. …
Satọdee, Nọvemba 13, 2021 Monday, October 11, 2021 by Jọshụa James
NGINX bụ isi mmalite mepere emepe, ngwa nkesa HTTP efu. Na mgbakwunye na ikike nkesa HTTP ya, NGINX nwekwara ike ịrụ ọrụ dị ka ihe nkesa proxy maka e-mail (IMAP, POP3, na SMTP) yana proxy na-atụgharị na ihe nkwụnye ụgwọ maka HTTP, TCP, na UDP sava. Ebumnuche n'azụ NGINX bụ imepụta ngwa ngwa…
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux 8, NGINX
Page1 Page2 ... Page4 Osote →